Hetsika 4 hatao any amin'ny fararano any ivelany | Bezzia
Hetsika 4 hatao any amin'ny fararano any ivelany
Maria vazquez | 01/09/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 29/08/2021 23:45 | Ocio
Ny fahalavoana dia miaraka aminy ny mari-pana ambany kokoa nefa mahafinaritra ihany ny mankafy hetsika ivelany. Tsy satria tonga ny fahalavoana dia mila mahafoy ireo isika ary manidy ny tenantsika ao an-trano. Misy maro hetsika atao amin'ny fararano izay mamela antsika hankafy ireo mampiavaka an'ity vanim-potoana amin'ny taona ity.
Afaka mieritreritra drafitra maro azontsika tanterahina mandritra ny taona isika fa izany amin'ny fararano dia manana loko manokana izy ireo. Na miaraka amin'ny orinasa na irery, ireo izay tia fanatanjahantena ety ivelany dia ho afaka mankafy ny velaran-tany tsy manam-paharoa amin'izao fotoana izao. Fa misy koa hetsika hafa milamina kokoa izay afaka ankafizinao be dia be.
1 Mitsangatsangana amin'ny valan-javaboary voajanahary
2 Làlana bisikileta mamaky ny làlambe
3 Ho an'ny holatra
Mitsangatsangana amin'ny valan-javaboary voajanahary
Ny fararano dia manome antsika tontolo mahafinaritra ary izany no mahatonga ny fotoana mety hitsidihana ny iray amin'ireo valan-javaboary voajanahary eto amintsika. Ireo koa dia manome antsika làlana samihafa ka tsy sarotra ny mampifanaraka ny diany amin'ny toetran'ny vondrona.
Mila hevitra ve ianao? Betsaka ireo valan-javaboary voajanahary tsara tarehy indrindra amin'ny fararano: Fraga de Catasós any Pontevedra, Gorbeia any amin'ny Basque Country, Urbasa any Navarra, Somiedo any Asturias, Picos de Europa any León, Montseny any Catalonia, Arribes del Duero any Zamora sy Salamanca, Cazorla, Segura ary ny Villas ao Jaén, ny Sierra Nevada any Granada….
Raha mandeha miaraka amin'ny ankizy ianao Azonao atao ny manao izay mahafinaritra kokoa ny mandeha amin'ny alàlan'ny fanaovana zavatra tsotra toy ny fanangonana ravina fararano, fanasokajiana azy ireo amin'ny alàlan'ny ravina ravina, izay amin'ny fararano dia hiala amin'ny maitso ka hatrany amin'ny mavo sy mena. Aorian'izay dia afaka misafidy ny tsara indrindra ianao ary manama azy amin'ny gazety an-trano mba hanao asa tanana isan-karazany amin'ny ririnina.
Làlana bisikileta mamaky ny làlambe
Miaraka amin'ny fiovan'ny ravina ho mavo sy ocher dia misy làlam-by miova amin'ny fararano. Ary maninona raha mahita azy ireo amin'ny bisikileta? Nilaza izy ireo fa ho an'ny fahavaratra ireo bisikileta fa Ny hafanan'ny fararano dia mahafinaritra kokoa hankafizanao ity fialamboly ity, tsy ekenao ve?
Any Espana dia misy 2.000 XNUMX kilaometatra ny lalan-drano, amin'ny ankamaroan'ny ankamaroany dia mizotra amin'ny zotra fiaran-dalamby efa rava. Koa satria ny ankamaroan'izy ireo dia manaraka ny làlan'ny làlambe taloha, dia fisaka ihany koa izy ireo, ka dia mahafinaritra izy ireo ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Ny làlana Green de la Demanda Green eo anelanelan'ny La Rioja sy i Burgos, ny Plazaola Greenway any Navarra, ny Carrilet Greenway mamakivaky ny lohasaha ny faritra volkano ao La Garrotxa, ny Oso Greenway any Asturias ary ny Greenway of Monfragüe any Cáceres, dia tolo-kevitra vitsivitsy fotsiny .
Ho an'ny holatra
Amin'ny fahatongavan'ny fararano dia manomboka ny vanim-potoana holatra any Espana. Amin'izao fotoana amin'ny taona izao dia azo angonina izy ireo boletus, morels, chanterelles, chanterelles, trompetra mahafaty ... Ny sasany maniry eo am-pototry ny hazo, ny sasany kosa maniry eo ambony hazo amin'ny fizotran'ny lo.
Ny fitadiavana holatra, fanangonana ary fandrahoana azy ireo dia fomba tsara handanianao fotoana any ivelany. Iray amin'ireo hetsika tokony hatao amin'ny Fararano izay ahafahanao mankafy irery na miaraka amin'ny natiora natiora. Alohan'ny hanombohanao azy dia efa zava-dehibe ny fahalalana ny karazany isan-karazany ary fantaro izay misy poizina sy izay fihinana.
Betsaka ny karazana holatra ary ny sasany mety hahafaty raha atelina, noho izany ny fanombohana amin'ny olona iray manam-pahaizana momba io lohahevitra io dia afaka manampy be. Ianaro ny tena ilaina ary avy eo aza atsahatra ny fiofanana mba hanangonana holatra vanim-potoana ary handany azy tsara.
Manana zaridaina ve ianao? Ankafizo ny manao ireo asa mahazatra amin'ity vanim-potoana amin'ny taona ity. Esory izay zavamaniry marary na zavamaniry marary hisorohana ny fihanaky ny bibikely sy ny aretina. Aorian'izay, manonta conifers sy evergreens ary apetaho ny zezika zavamaniry.
Ity vanim-potoana ity koa no mety hambolena tulip, bolam-bolo na daffodil. Mba hamelana ny jiro sy ny isan-taona amin'ny lohataona dia mila mamboly amin'ny fararano ianao. Azonao atao ihany koa ny mamboly voninkazo amina vanim-potoana toy ny krysanthemum, pansies na heather izay manja ny zaridaina
Eny, etsy ankilany, te hanomboka hanao zaridaina ianaoAmin'izao fotoana izao dia afaka mamboly seleria, tongolo, broccoli, parsnip, karaoty na epinara ianao, ary koa anana manitra toy ny valerian, rosemary, thyme na persily.
Iza amin'ireo hetsika tokony hatao ao amin'ny Fararano no tena mahasarika ny sainao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Ocio » Hetsika 4 hatao any amin'ny fararano any ivelany
Randrana Cascade: Jereo ny fomba hanaovana azy amin'ny fomba tsotra!
Antony tsy ankafizinao ny fanaovana firaisana amin'ny mpivady